“Asongadin’ny Asan’ny Vondrom-piarahamonina Ny Fandraisana Anjara Anaty Firaisankinan’Ireo Olompirenena Mba Hampiroboroboana Ireo Asa Manatsara Endrika Ny Vondrom-piarahamoninay”” · Global Voices teny Malagasy
“Asongadin'ny Asan'ny Vondrom-piarahamonina Ny Fandraisana Anjara Anaty Firaisankinan'Ireo Olompirenena Mba Hampiroboroboana Ireo Asa Manatsara Endrika Ny Vondrom-piarahamoninay””
MpanoratraGamaliel Bautista Sánchez
Voadika ny 10 Aogositra 2018 4:50 GMT
Mangataka amin'ny olona ny Tetikasa Reframed Stories mba hamaly ireo lohahevitra sy olana mibahan-toerana izay mitranga any anatin'ireo fandrakofam-baovao mikasika ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Ireny tantara ireny dia taratr'ireo olona matetika ny hafa no misolo tena azy any anaty media. Noforonina ny zavonteny tamin'ny nampiasàna ny sehatra Media Cloud , fitaovana iray fanadihadiana ireo angondrakitra izay mandinika ny fitambaran'ireo media nivoaka tamina fotoana iray voafaritra, ahafahan'ireo mpandray anjara manadihady sy mifanakalo hevitra momba ireo hevitra santatra mifandraika amin'izay mety azo hanehoana azy ireny any anatin'ireo media. Tandreman'ilay tetikasa tsara ny tsy hanao fehinkevitra maimaika momba ilay angondrakitra, fa aleony manomboka teboka iray izy mamorona habaka iray hisian'ny fifankalozankevtra momba izay fomba ahafahan'izy ireo mandrafitra ny fanehoana azy ireo eny anaty media azy ireo ihany amin'ny alalan'ireo media nomerika.
Avy amin'ny vondrom-piarahamonina ao San Luis Beltrán i Gamaliel Bautista Sánchez sady mpikambana iray amin'ny Onjampeo Guelaguetza, onjampeo iray mpizara vaovao an'ny vondrom-piarahamonina ao Oaxaca, Mexico. Tsonga iray ity ho an'ny filazàna “tequio“, izay ampiasaina ao Meksika mba hanoritana ny asa iombonana miasa ho an'ny vondrom-piarahamonin'ny tsirairay.
Ireo teny manjaka avy amin'ireo lahatsoratra 836 navoaka teo anelanelan'ny volana May 2017 sy ny volana May 2018 milaza ny “tequio” (asa iombonana miasa ho an'ny vondrom-piarahamonina) ao anatin'ireo lahatahiry roa an'ny Media Cloud mikasika ireo media mpamoaka vaovao amin'ny teny Espanolà ao Meksiko (fijerena sary lehibe kokoa).
Ny fahitàna ny teny hoe ‘tequio’ dia mitondra antsika avy hatrany hiverina any amin'ny fanjakan'i Oaxaca, satria toetra iray mampiavaka an'ireo mponina ao Oaxaca [ny asa iombonana] ary izay no fijerin'izy ireo anay avy any ivelany. Manasongadina ny firaisankinan'ireo olom-pirenena ny asa ho an'ny vondrom-piarahamonina mba ho fampiroboroboana ireo asa manatsara endrika ny vondrom-piarahamoninay, toy ny fanadiovana, ny fanarenana sy ny famonjena an'ireo toerana ho an'ny daholobe, ireo rehetra ireo tsy misy tambiny ara-bola.
Ato amin'ny firenenay, te-hametraka io kolontsaina io ho tetikadim-panjakana ireo tomponandraiktra, amin'ny fakàna ireo fahalalana ananan'ireo vahoaka indizeny hifanaraka amin'ireo politikam-panjakana. Kanefa, tsapanay fa mbola ambony noho io ny tequio, fomba fiainana io, fiarahamonina, firaisankina sy fandaminana ao anatin'ireo vondrom-piarahamoninay. Rehefa mahazo toerana ao an-drenivohitra ireo olom-pirenena avy amin'ny vondrom-piarahamonina indizeny, dia manana fahazarana izy ireo hitahiry ny fomba nentin-drazany amin'ny fampivoarana an'ireo asa ireo ihany ho tombontsoan'ny vondrom-piarahamonina vaovao misy azy ireo .
Amin'ny lafiny iray indray, misy ireo fironana mitady hanamaivana io fomba fiarahamiasa mifototra amin'ny fahalalana tranainy io. Noho izany misy andraikitr'ireo vondrom-piarahamonina, ireo fikambanana, ary ireo olom-pirenena mazoto ny fikarakarana, fanapariahana sy fitahirizana io lova tsy takatry ny saina nentin'ireo vahoakanay teratany io.
Ampahany tamin'ireo andiana Rising Frames iray izy ity, novolavolaina ho ampahany amin'ny sehatrasa nokarakarain'ny fikambanana SURCO A.C. ao Oaxaca, Meksiko. Nanampy tamin'ny fikarakarana ny sehatrasa iray natao tamin'ny 29-30 May 2018 tao Oaxaca, Meksiko izy io, izay nampivondrona an'ireo solontenan'ny fikambanana isankarazany sy ireo vondrona, anisan'izany ireo onjampeo an'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana, mba hijerena ny fomba hanehoana azy ireo na ireo olana manahirana azy ireo ao anatin'ireo vondrona media meksikàna, ary namorona tantara ho setrin'izay fanehoana izay.
9 ora izayAmerika Avaratra